वीरगन्ज महानगरमा ३२ हजार मत गणना, कुन वडामा काे विजयी ? - Everest Dainik - News from Nepal
वीरगन्ज महानगरमा ३२ हजार मत गणना, कुन वडामा काे विजयी ?
वीरगन्ज, असोज ७ । प्रदेश नम्बर २ मा निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको वीरगन्ज वीरगन्ज महानगरपालिकामा अहिलेसम्म ३२ हजार मत गणना भएको छ ।
गत सोमबार भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा वीरगन्जमा ८४ हजार मत खसेको थियो । ३२ वटा वडा रहेको वीरगन्जमा मंगलबारबाट मतगणना सुरु भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस रोल्पामा पुन चार गुणा बढी मतले अगाडि
मतगणना निकै नै सुस्त गतिमा भएको भन्ने चौतर्फी आलोजना भइरहेको बेला वीरगन्ज महानगरपालिका अहिलेसम्म ३२ हजार मत गणना भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस माओवादीका अग्नी सापकोटा ४०० मतले मन्त्री बस्नेत भन्दा अगाडि
याे पनि पढ्नुस कोरोना संक्रमणको आशंकामा २ जनालाइ नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याइयाे
ट्याग्स: Birgunj, Election Result